]N'ogbe LED Decorative Light, LED Light Fixtures Supplier | Ụtọ
Ụlọ > Ngwaahịa
Ọkụ eji achọ mma LED a na-ejikarị eme ihe ịchọ mma nke mbara ala, nnọkọ oriri na ọṅụṅụ, n'èzí na mgbidi, a na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ dị iche iche. N'ihi na ọkụ na-achọ mma LED bara ụba na agba, na-azọpụta ike ma na-adịgide adịgide, ha ejirila nwayọọ nwayọọ ghọọ nhọrọ na-ewu ewu maka ịchọ mma na ụlọ ọrụ dị iche iche. N'oge a, anyị na-eje ije n'okporo ámá, na anyị nwere ike ịhụ ji achọ LED ọkụ maka n'èzí n'ebe nile. Karịsịa Ikanam eriri ji achọ ọkụ na osisi, na ikanam net ntupu akụkọ ifo eriri ji achọ ọkụ bụ a sinik ahịrị n'abalị.
Ụtọ N'ùkwù n'ụdị dị iche iche nke LED ji achọ ọkụ, gụnyere LED n'èzí ji achọ ọkụ, LED mgbidi ji achọ ọkụ, LED ime ụlọ eji ọkụ, LED nghọta ji achọ ọkụ, LED n'uko ji achọ ọkụ, na na. Anyị na-ọpụrụiche na mmepụta na nnyocha nke LED decorative ọkụ maka afọ 18 na mgbe niile na-eji kasị elu àgwà akụrụngwa na-enye ndị ahịa ihe kasị mma LED decorative ọkụ LED warara ọkụ ngwọta.
]RGB silicone led strip na-agbanwe ugbu a n'ihi enweghị mmiri IP68 na-enweghị atụ, yana ogo ngwaahịa dị elu.A na-ejupụta silicone n'ime ọkụ ahụ dum, ka ọ na-eme ka mgbochi mmiri dịkwuo mma ma gbasaa ndụ ọrụ ya.Anyị nwere nhọrọ abụọ maka ụdị a, otu bụ 30 leds / m, nke ọzọ bụ 60 leds / m.Gịnị na-eme ka anyị dị iche?1. 5 mita/10mita kwa mkpọ, igbe agba dịkwa maka mkpọsa.2. ogbako SMT na-enweghị uzuzu, ahịrị erugharị akpaka na ụlọ nyocha na-ekwe nkwa ịdịmma3. Ọrụ na-enweghị nchekasị maka nrụpụta, nzọrọ omenala, ọrịre ahịa, wdg.4. Ahụmahụ afọ 19, ụlọ ọrụ 50,000㎡, yana ndị ọrụ ọkachamara 1000+5. Nlereanya efu dị
ahaziri Glamour anyanwụ n'okporo ámá ìhè mmeghe arụpụta Si China | Ụtọ
]Na vidiyo a, anyị ga-egosi gị ọkụ okporo ụzọ anyanwụ anyị. A raara anyị nye ụlọ ọrụ ọkụ maka ihe karịrị afọ 18.Anyị nwere ọtụtụ uru n'ichepụta ụdị a. Ka anyị chọpụta.
Mwepụta ọhụrụ RGB na-achụ ọkụ mgbawa ọkụ sitere na ndị na-ebubata ya na ndị nrụpụta | Ọkụ ọkụ
]Mwepụta ọhụrụ RGB na-achụ ọkụ mgbawa ọkụ sitere na ndị na-ebubata ya na ndị nrụpụta | Ọkụ ọkụ
DL45 Igwe ọkụ ọkụ
]Igwe ọkụ LED: 1. Mfe maka ntinye na nnọchi. 2. Oriri ike dị ala na nchekwa ike. 3. Transparent，frosted na yi okpu dị niile dị. 4. Enwere ike iji ya mee ihe maka ụlọ, oriri na ọṅụṅụ, mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ngosi, ihe ngosi windo mma. 5. Ọ bụrụ na ọ na-ejikọta ya na ìhè belt, ọ nwere ike itinye ya na nnukwu ọnụ ebumnobi maka ịchọ mma okporo ụzọ, na-egosi ọmarịcha na mma. 6. CE nkwado
IP65 180LEDs Silicone Tube Mgbanwe Ikanam Strip Light High Lumen High Quality
]Nkọwa ngwaahịa:1. IP65 enweghị mmiri3. Ọmarịcha ihe mgbochi odo odo4. Na-eguzogide elu na obere okpomọkụ5. Magburu onwe corrosion eguzogide ihe onwunweUru mmepụta:1. Ọmarịcha UV eguzogide arụmọrụ& mgbochi odo mgbe ejiri ogologo oge were2. Nguzogide corrosion siri ike, akụrụngwa kemịkalụ kwụsiri ike, ọ dịghị mfe ire ere3. Nguzogide ihu igwe pụtara ìhè, nwere ike idowe ọnọdụ dị nro na mgbanwe n'etiti ogo -50-1504. Ezi conductivity thermal& ezigbo ikpo ọkụUru ọrụ:1. Agba na size ọrụ ahaziri dị. Anyị ga-aza ngwa ngwa ma nye ngwọta n'oge adịghị anya.2. Anyị na-enye ọrụ nkwado teknụzụ kwekọrọ, ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla nke ngwaahịa anyị.3. Ndị ọkachamara ọkachamara anyị nwere ike inye gị ọrụ mmepe ngwaahịa iji nweta mkpa gị
Okwu Spain ekeresimesi ọkụ ọkụ ọkụ Motif ọkụ na-egosi IP65 n'èzí Project Supplier& ndị na-emepụta ihe | Ụtọ
]Nkọwa ngwaahịa:Nke a bụ otu n'ime ọrụ ọkụ anyị na Spain. Onye ahịa ahụ jiri ngwaahịa ọkụ ọkụ LED chọọ okporo ámá ahụ mma, bụ́ nke na-ekepụta ọnọdụ ememme mara mma na ọrụ a.Ị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ngwaahịa anyị na-eji na plece a, gụnyere ọkụ eriri LED, ọkụ eriri LED, ọkụ motif ọkụ na ihe ndị ọzọ.Karịsịa ngwaahịa ọkụ n'okporo ámá LED anyị kacha mara mma, nke nwere ọtụtụ ụdị na imewe dị ka bọọlụ ekeresimesi, ifuru, kpakpando, snowflake na ndị ọzọ.Ha na-agafe n'okporo ámá, na-eme ka okporo ámá ahụ dum dị ndụ.Glamour abụrụla onye ndu na ahịa ọkụ na-achọ mma LED, nwere ahụmịhe afọ 20 na ngalaba ahụ, otu ndị nrụpụta mara mma, ndị ọrụ nwere nkà, yana sistemụ njikwa ngwaahịa siri ike. Glamour LED motif ọkụ na-adọta mmụọ okike sitere n'ọdịnala na isiokwu dịgasị iche iche, na-ebute ihe karịrị 400 atụmatụ echedoro patent ọhụrụ kwa afọ. Igwe ọkụ na-egbuke egbuke na-atụle nke ọma ihe ngosi eji eme ihe, na-ekpuchi usoro ekeresimesi, usoro Ista, usoro Halloween, usoro ezumike pụrụ iche, usoro kpakpando na-egbuke egbuke, usoro snowflake, usoro foto, usoro ịhụnanya, usoro oké osimiri, usoro anụmanụ, usoro mmiri, usoro 3D, n'okporo ámá. ọnọdụ usoro, ụlọ ahịa nnukwu ụlọ ahịa usoro, wdg Ka ọ dịgodị, Glamour na-aga n'ihu ịzụlite Ọdịdị, ihe, n'ichepụta usoro, na nkwakọ usoro nke motif ọkụ iji melite ahịa afọ ojuju na ala mbupu ụgwọ, nke meriri otuto nke dị iche iche engineering ngo. Ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa
Glamour Lighting Christmas ịchọ mma LED motif ọkụ ogbako mmeghe Supplier& ndị na-emepụta ihe | Ụtọ
]Nkọwa ngwaahịa1. Chepụta ọkụ motif dị iche iche dịka omenala na ememe dị iche iche si dị.2. Ihe ịchọ mma dị iche iche na-eji ọkụ motif, dị ka ntupu PVC, garland na osisi PMMA.3. Igwe nchara na etiti aluminom na-adịghị nchara dị.4. Nwere ike inye mkpuchi ntụ ntụ maka ọgwụgwọ etiti.5. Motif ìhè nwere ike ịbụ n'ime ụlọ& Eji n'èzí.6. IP65 waterproof rating.Glamour abụrụla onye ndu na ahịa ọkụ na-achọ mma LED, nwere ahụmịhe afọ 20 na ngalaba ahụ, otu ndị nrụpụta mara mma, ndị ọrụ nwere nkà, yana sistemụ njikwa ngwaahịa siri ike. Glamour LED motif ọkụ na-adọta mmụọ okike sitere n'ọdịnala na isiokwu dịgasị iche iche, na-ebute ihe karịrị 400 atụmatụ echedoro patent ọhụrụ kwa afọ. Igwe ọkụ na-egbuke egbuke na-atụle nke ọma ihe ngosi eji eme ihe, na-ekpuchi usoro ekeresimesi, usoro Ista, usoro Halloween, usoro ezumike pụrụ iche, usoro kpakpando na-egbuke egbuke, usoro snowflake, usoro foto, usoro ịhụnanya, usoro oké osimiri, usoro anụmanụ, usoro mmiri, usoro 3D, n'okporo ámá. ọnọdụ usoro, ụlọ ahịa nnukwu ụlọ ahịa usoro, wdg Ka ọ dịgodị, Glamour na-aga n'ihu ịzụlite Ọdịdị, ihe, n'ichepụta usoro, na nkwakọ usoro nke motif ọkụ iji melite ahịa afọ ojuju na ala mbupu ụgwọ, nke meriri otuto nke dị iche iche engineering ngo. Ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa
Quality IP67 waterproof silicone ikanam warara SMD 5050 60 LEDs / m 5m / 10m Manufacturer | nkwado nlekiri
Nkọwa ngwaahịa:1. IP67 na IP68 enweghị mmiri2. Silicone tube na gluu zuru ezu& silicone extrusion maka nhọrọ3. Ọmarịcha ihe mgbochi odo odo4. Na-eguzogide elu na obere okpomọkụ5. Magburu onwe corrosion eguzogide ihe onwunweUru mmepụta:1. Ọrụ mgbochi mmiri pụtara ìhè2. Ọmarịcha UV eguzogide arụmọrụ& mgbochi odo mgbe ejiri ogologo oge were3. Nguzogide corrosion siri ike, akụrụngwa kemịkalụ kwụsiri ike, ọ dịghị mfe ire ere4. Mgbochi ihu igwe pụtara ìhè, nwere ike idowe ọnọdụ dị nro na mgbanwe n'etiti ogo -50-1505. Ezi conductivity thermal& ezigbo ikpo ọkụUru ọrụ:1. Agba na size ọrụ ahaziri dị. Anyị ga-aza ngwa ngwa ma nye ngwọta n'oge adịghị anya.2. Anyị na-enye ọrụ nkwado teknụzụ kwekọrọ, ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla nke ngwaahịa anyị.3. Ndị ọkachamara ọkachamara anyị nwere ike inye gị ọrụ mmepe ngwaahịa iji nweta mkpa gị